‘पाकिस्तानका हिरो’ शाहीन आफ्रिदी को हुन् ? जसलाई शाहीद आफ्रिदीले छोरी दिँदैछन् – Dcnepal
‘पाकिस्तानका हिरो’ शाहीन आफ्रिदी को हुन् ? जसलाई शाहीद आफ्रिदीले छोरी दिँदैछन्
प्रकाशित : २०७८ कार्तिक १० गते १३:३५
काठमाडौं। सन् २०२१ को टी-२० विश्वकप यूएइ र ओमानमा जारी छ। विश्वका चर्चित क्रिकेटर सहभागी छन्। हरेक क्रिकेटरको नाम चर्चामा आइरहेको छ। त्यसैमध्ये चर्चामा आइरहेको एक नाम हो, शाहीन शाह अफ्रिदी।